Tora DWG Dhirowa kubva kuTemporary Mafaira
musha Products DataNumen DWG Recovery Tora DWG Dhirowa kubva kuTemporary Mafaira
Kana iyo Autosave ficha ikagoneswa muAutoCAD, ichaita gadzira mafaira ekuchengetedza otomatiki kana uchigadzira dhizaini. Nokutadza, mafaera ekuchengetedza achachengetwa paWindows temporary dhairekitori uye mafaira ekuwedzera ari .sv $.
Kana dambudziko redata rikaitika, semuenzaniso, AutoCAD inopunzika kana neimwe nzira isingagadziriswe nenzira yechirongwa, unogona kudzosera data rakachengetwa mu.sv $ mafaera nekutsvaga iyo autosave faira, ichipa zita zvakare.sv $ wedzera kune .dwg uyezve kuvhura iyo faira muAutoCAD. Iyo autosave faira ichave iine ruzivo rwese rwekupedzisira seyekupedzisira autosave kumhanya
Kana AutoCAD inoshuma kukanganisa kana ichivhura iyo yakatumidzwazve zita rekuti autosave faira, zvinoreva kuti iyo faira ye autosave yakashatisa kana kukuvara nekuda kwedambudziko redata
AutoCAD ine yakavakirwa-mukati "Kudzoreredza" rairo iro rinogona kushandiswa kudzoreredza yakashata kana yakakuvara autosave faira, seinotevera:
Sarudza menyu Faira> Dhirowa Zvishandiso> Kudzoreredza
Mune Sarudza Faira dialog bhokisi (yakajairwa faira yekusarudza dialog bhokisi), pinda yakaora kana yakakuvara dhizaini zita rezita kana sarudza iyo faira.
Mhedzisiro yekudzosera inoratidzwa mumavara hwindo.
Kana iyo faira ikawanikwazve, ichavhurwa zvakare muhwindo guru.
Kana iyo faira isingakwanise kuwanikwazve neAutoCAD, saka unogona kushandisa chigadzirwa chedu DataNumen DWG Recovery kugadzirisa iyo yakashata autosave faira uye kugadzirisa dambudziko.
Semuenzaniso yekuchengetedza faira: sample_autosave.sv $
Kunzwisisa AutoCAD backup uye autosave mafaera